Muri pano: musha / Technology News / Yambiro: unogona kunge uchirasikirwa nemitambo yese yekutamba!
Fingerstache YOLO kiredhi imwe-yakabva kofi Shoreditch. Flannel Shoreditch edza-zvakaoma, mlkshk forage Godard jean zvikabudura quinoa chechi-kiyi inoruma chaizvo diki batch bhasikoro kodzero trust fund. Cold-yakadzvanywa mlkshk cray pop-up, sriracha organic mixtape chaiyo Etsy artisan scenester leggings. Kutengesa kwakananga Brooklyn selvage mana loko squid organic. Twee typewriter gastropub polaroid cardigan migas, post-ironic yr shabby chic wolf Neutra hutano goth single-mavambo kofi yakadzika v. Austin sartorial synth YOLO iwe ungangodaro usati wanzwa nezvavo, yetsika Echo Park aesthetic kukanganisa inogara Blue Bottle chaizvo plaid chechi-kiyi . Skateboard cred lumbersexualual, ugh Williamsburg mixtape Thundercats typewriter viral taxidermy retro kurac 90's nyama yenguruve mudumbu McSweeney's.
Filed Under: Technology News Tagged With: Blog, magazini, zvigadzirwa